Propecia - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Propecia
Generic Name: Propecia Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Propecia ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Propeciaကိုအမျိုးသားတွေမှာငယ်ထိပ်နဲ့ဦးရေပြားအလယ်ပိုင်းတွင်ဆံပင်များကျွတ်ခြင်းကိုကုသဖို့အတွက်သုံးပါတယ်။ အမျိုးသားတွေပုံစံဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဆိုတာအမျိုးသားတွေမှာဦးရေပြားကဆံပင်တွေပါးလာတာကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲအတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာငယ်ထိပ်ပြောင်ခြင်းအခြေအနေကိုရနိုင်ပါတယ်။
Propeciaကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျသောက်ပါ။ ညွှန်ကြားထားသည်ထက်ပိုသောက်ခြင်း၊လျှော့သောက်ခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ ဆေးညွှန်းမှာပါတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
ဆေးရဲ့အကောင်းဆုံးအာနိသင်ကိုရရှိရန်ဆေးကိုပုံမှန်သောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုမရခင်ဆေးကိုသုံးလနဲ့အထက်နေ့တိုင်းသောက်ဖို့လိုပါတယ်။Propeciaဆေးကိုဆက်သောက်ပါကဆေးဟာကြာရှည်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ယခုဆေးဟာသင့်အတွက်၁၂လကြာတဲ့အထိအာနိသင်မပြပါကအခြားဆေးတွေကလည်းသင့်အတွက်အကျိုးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်Propeciaဆေးကိုသုံးတာရပ်လိုက်ပါကဆေးရပ်လိုက်ပြီး၁၂လအတွင်းမှာသင့်ဆံပင်တွေပြန်ကျွတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့သင့်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
ယခုဆေးဟာသင့်အတွက်အကျိုးရှိပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမဖြစ်စေဘူးဆိုတာသေချာစေဖို့အတွက်သင့်သွေးကိုမကြာခဏစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်အနေနဲ့ဆီးကျိတ်ကင်ဆာရှိမရှိကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်prostate specific antigen(PSA) ကိုစမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ဆရာဝန်ဆီကိုပုံမှန်သွားပါ။
Propeciaကိုအခန်းအပူချိန်မှာထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ တိုက်ရိုက်နေရောင်ထိတွေ့နိုင်သောနေရာနှင့်စိုစွတ်နေတဲ့နေရာတွေကနေဝေးဝေးထားပါ။ ဆေးအာနိသင်မပျက်အောင်ဆေးကိုရေချိုးခန်းနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲကိုမထည့်ထားသင့်ပါ။Propeciaဆေးအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဆေးထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ချက်များလည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ဆေးကိုသူတို့နဲ့ဝေးရာမှာထားသင့်ပါတယ်။
Propeciaကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Propecia အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Propecia ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(FDA)ကPropeciaကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေအဆင့်Xလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Propecia ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးနဲ့ဓါတ်မတည့်တဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အောက်ပါလက္ခဏာတွေရရှိပါကအရေးပေါ်ဆေးကုသမှုခံယူပါ။ အရေပြားတွင်အနီကွက်များထွက်ခြင်း၊မျက်နှာ၊နှုတ်ခမ်း၊လျှာနဲ့လည်ချောင်းများရောင်ခြင်း။ ရင်သားမှာအလုံးစမ်းမိခြင်း၊နာကျင်ခြင်း၊နို့သီးခေါင်းမှအရည်များထွက်ခြင်းနဲ့အခြားရင်သားပြောင်းလဲမှုတွေရှိပါကဆရာဝန်ချက်ချင်းခေါ်ပါ။ အဲဒီအရာတွေကအမျိုးသားရင်သားကင်ဆာရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလူတိုင်းခံစားရတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်မှာမပါတဲ့အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်။ သင့်ဆီမှာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုခုရှိတယ်ထင်ပြီးသံသယဝင်နေပါကသင့်ရဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Propecia နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Propeciaကသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီးဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Propecia နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Propecia နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Propeciaဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Propecia ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Propecia ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးလူနာတွေအတွက်ဆေးပမာဏသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသေးပါ။ သင့်ကလေးအတွက်ဆေးဟာဘေးမကင်းနိုင်ပါဘူး။ ဆေးကိုမသုံးခင်ဆေးရဲ့ဘေးကင်းမှုကိုအပြည့်အဝနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အသေးစိတ်အတွက်သင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Propeciaဆေးကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက(မေ့ခဲ့ပါက)သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ နိုဝင်ဘာ 26, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မေ 18, 2019
Propecia®. https://www.drugs.com/dosage/Propecia.html. Accessed April 15, 2017
Propecia®. http://www.rxlist.com/propecia-drug.html. Accessed April 15, 2017
ခါးနာခြင်းဝေဒနာကို ကုစားပေးမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ
ဗုံလုံသီး (ပဲလင်းမြွေသီး) ကြိုက်ကြလား
တစ်နေ့တာအတွက် အရေးပါတဲ့ မနက်စာကိုဘာတွေစားကြမလဲ
ဆီးချိုရှိသူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးသောအစားအစာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ…